Akhriso : Maxay Kawada Hadleen Hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaran iyo Guddoonka Golaha Shacabka? – Goobjoog News
Guddoomiyaha madasha xisbiyada ahna madaxweynihii ee dalka Shariif Sheekh Axmed, iyo guddoomiyaha xisbiga UPD, xubinna ka ah madasha madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kulan Muqdisho kula qaatay guddoomiyaha golaha shacabka ee Baarmaanka federaalka Soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa koowaad.
Halkaan Ka Akhriso qoraaka Madasha
Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran ahna Madaxweynihi hore ee dalka mudane Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Madaxweynihi hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan daba socda shirkii maalin ka hor ay ku yeesheen xarunta Madasha Xisbiyada Qaran waxay maanta la qaateen Guddoomiyaha Golaha Shacabka mudane Maxamed Mursal iyo Gud. Ku xigeenka koowaad ee Golaha shacabka C/wali Sheekh Ibraahim Muudey.
Ujeedka kulanka ayaa ahaa in qodobadii laga wada hadlay la dar dar geliyo waxaana si’ gaar ah diiradda loo saaray sidi loo soo celin lahaa wada shaqeynta labada Aqal ee Baarlamanka Soomaaliya, iyadoo warbixin laga dhageystay Madaxweyne hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay la soo kulmay Guddoomiyaha Aqalka Sare mudane Cabdi Xaashi iyo Gud. Ku xigeenka koowaad ee Aqalka Sare Mudane Abshir Bukhaari.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa isku dayeysa inay kaalin ka qaadato dib u heshiisiinta hey’adaha qaar ee Dowladda Federaalka oo khilaaf uu hareeyey, waxaana socda dadaal ballaaran oo Madasha XQ ugu jirto in dib loo soo celiyo kalsoonidi iyo wada shaqeyntii ka dhaxeysay labada aqal ee Baarlamanka Soomaaliya.